Dryfree tumadi akanyam dehydrator, anyanwụ dryers, okpomọkụ mgbapụta draya igwe na anyanwụ + okpomọkụ mgbapụta draya.
Ekwentị: +86 769-21666979
Ndoputa Ike Oku Mmanya Mpempe Nke Mpempe Na Mpempe Akwụkwọ
Ike Nchekwa Anyanwụ Oku Mmanya Mpepepe nri
40-60kg Igwe na-ahụ maka anyanwụ Solar
300kg Domestic Solar Okpomọkụ mgbapụta draya
800kg Commercial Okpomọkụ mgbapụta draya
1500kg ahaziri Commercial Dehydrator
Mkpụrụ osisi akọrọ na Dehumidify Machine
Higher Dehumidify Fish kpọrọ nkụ Machine
Ifuru kpọrọ nkụ na Water Recovery System
Industrial Akwụkwọ tube Ma ọ bụ Wood kpọrọ nkụ Machine
Industrial sludge akọrọ na Dehumidify Machine
Solar + ndabere Okpomọkụ mgbapụta draya Machine
Full-Automatic Okpomọkụ mgbapụta kpọrọ nkụ System
Steam-Mee CPC Solar na okpomọkụ mgbapụta Machine
Igwe mmiri nke anwụ
Solar pv ngwaahịa
Mkpụrụ Ihicha Machine
Okooko osisi Ihicha Machine
Agricultural Products Ihicha Machine
Herbs Ihicha Machine
Meat Products Ihicha Machine
Erimeri Ihicha Machine
Industrial Products Ihicha Machine
Okpomọkụ mgbapụta Meat draya Machine
Food dehydrator apple ibe
Akwụkwọ nri akpịrị ịkpọ nkụ Machines
Solar Energy Akwukwo nri akpịrị ịkpọ nkụ Machines
Commercial mkpụrụ osisi na akwukwo nri Dehydrator Machine
ugbo groundnut draya
groundnut ihicha igwe emeputa
Agricultrual groundnut ihicha igwe
Draya na mmiri mgbake usoro nwere pụrụ iche imewe na-eke agba maka mịrị amị products.At n'otu oge, na-emesi ndị ngwaahịa mma ka gara aga lab ule na green-nri standard.The mmiri mgbake usoro nwere ike naghachi banyere 40% ọzọ ma ọ bụ obere mkpa mmanụ.
1.Equipment kwa unit nhazi ike na 600-700kg nke okooko osisi.
2.The nhazi oge nke ọ bụla na ngwaọrụ na-achịkwa n'ime 18hours.
3.The ihicha okpomọkụ nke ngwá ga-gbanwee mgbanwe n'etiti 30degrees na 65degrees, na ọnọdụ okpomọkụ ga-n'ụzọ ziri ezi na-achịkwa.
4.The dum na-ekpo ọkụ ikuku mgbasa usoro nke ngwá kwesịrị e ọkà mmụta sayensị iji hụ na ihicha ihe na edo na ọ dịghị ihe nwụrụ anwụ n'akuku.
5.The ọkụ gas mepụtara ngwá n'oge nhazi na ihicha usoro na ifịk ifịk mmiri ga-condensed na a na-adọ manner.Direct kọntaktị na condensing mmiri mmiri (cell mmiri mmiri) na-achọ na ojiji nke 304stainless ígwè ihe onwunwe (tinyere a mgbake tree, a ntoonu anwụrụ, nchekwa tankị, etc.) iji hụ na condensed mmiri mmiri na-adịghị mmeru.
6.The jụrụ mmiri okpomọkụ nke ekesa jụrụ mmiri mee ihe na condenser bụ n'okpuru 15degrees, na iru mmiri nke mmiri gas abanye condenser bụ banyere 50degrees na iru mmiri bụ karịa 70% .Onye iru mmiri nke gas mgbe odide a chọrọ iji belata ka banyere 40% .Onye mmiri mkpụrụ ruru nke ọhụrụ okooko osisi bụ banyere 40%.
Draya na mmiri mgbake usoro nwere ike iji na-akọrọ ya okooko osisi, pụrụ iche akwụkwọ nri na herbs.
(1) Okooko osisi: dị ka rose, chrysanthemum, lavender, Jasmine, etc.
(2) Special vegetables: dị otú ahụ dị ka ụbọchị lily, Lotus akwukwo, Mint akwukwo, etc.
Rose ihicha na Bulgaria
Chrysanthemum ihicha na Guizhou
Previous: Steam-Mee CPC Solar na okpomọkụ mgbapụta Machine
Next: Air draya maka ihicha mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri / banana ibe draya igwe
item High okpomọkụ na dehumidity ike okpomọkụ mgbapụta akọrọ igwe
Ike isi iyi ụdị 380V / 3N- / 50HZ
Compressor ọsọ ọsọ ike 12HP
Brand ndagwurugwu wheel si America
ụdị Mechiri emechi vortex Compressor
Evaporator Hydrophilic aluminum foil uwe
Condenser Hydrophilic aluminum foil uwe
gosiri okpomọkụ KW 36
gosiri na ugbu a A 18
Oke okpomọkụ / gosiri okpomọkụ ℃ 85/80
refrigerant ndochi olu KG 4.5 2
Ihere okpomọkụ ọnọdụ ℃ -60
size Okpomọkụ mgbapụta usu (mm) 2500 * 1400 * 1500
Okpomọkụ mgbapụta osote igwe (mm) /
Equipment ibu KG 500
Iyuzucha kacha okpomọkụ ℃ 115
Iyuzucha n'akụkụ mgbali Mpa ≦ 2,35
Axial eruba ofufe Power (KW) 0,75 * 1 / 1,1 * 1
nkọwapụta 380V / 3N- / F500
Air olu (m3) 10000-15000
waterproof larịị m
Pịnye nke electric ujo nchedo IP 4
Size nke ọla na nkwonkwo /
Standard ngwa Ntụziaka / akwụkwọ ikike kaadị / akwụkwọ
1.Providing elu okpomọkụ okpomọkụ mgbapụta ngwaahịa na-apụta site magburu onwe onwunwe na-eduga technology nanị.
2.Building zuru ezu oru naakwagide usoro site oru ọzụzụ na ndụmọdụ ọrụ.
3.Supporting mgbe nletaghachi na mmezi plan.
4.Providing akpan nyere onye n'ịkpọ ọrụ iji hụ na ezi nkwurịta okwu na nchikota na ahịa.
5.Committing na-enye 1 afọ free ngwaahịa akwụkwọ ikike oge na kwekọrọ ekwekọ akụkụ ahụ mapụtara.
6.Gradually nnyocha & na-emepe emepe na-upgrading na ngwaahịa, nkà na ụzụ na ngwọta.
Dryfree mgbe ego n'anya kwadebere maka na-enye gị ozi anyị. Anyị na-enye gị mapụtara akụkụ ọrụ n'ihi na 24 awa a ụbọchị otú i nwere ike naghachi mmepụta ngwa ngwa ma na-adọ na oyiyi akwa adọ ọnọ site anyị. Anyị nwere ike ịnapụta ndị ọtụtụ ndị na-eji oyiyi akwa anyị nkwakọba na Dongguan na nke ugbu a day.And anyị nwere ike ịjụ anyị gị n'ụlọnga na ndị mmekọ dị iche iche mpaghara enyemaka na mgbe-ire service.We na-ọma-ahụmahụ ná ngo mgbe-sales ọrụ management na toro site ahịa.
The magburu onwe, na-adọ na-ahụ mgbe-sales ọrụ bụ otu n'ime Dryfree ika ekele ụdịdị.
Dryfree ga-enye gị magburu onwe mgbe-sales ọrụ, n'agbanyeghị otú ndị ahịa ina-gbanwere. Ozugbo i nwere Dryfree si ngwá, anyị mgbe-sales ọrụ injinia ga-enye persistent ekele nkwa gị ego.
Wangyeda Technopark, Dongguan obodo, Guangdong Province, China.
Njikọ & mara ọkwa
Rose akpịrị ịkpọ nkụ oven , Rose Water Recovery Equipment , Chrysanthemum draya Machine , Rose kpọrọ nkụ Machine , Bay Leaf Ihicha Machine , Rose draya ,